������. ��������������������������� ��������������� - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ ५, २०७६
अहिले सामाजिक सञ्जालहरूतिर विशेष गरी युट्युबमा भाइरल एउटा विषय राजेश हमालको सन्तान नहुनु पनि हो । अचम्म त के छ भने सन्तान नभएको वा योजना नबनाएको जति पीर स्वयं राजेश र मधु हमाललाई परेको छैन, त्योभन्दा ठूलो पीर यी अध्येताहरूलाई छ । हो, यसैलाई भन्छन्– सच्चा शुभचिन्तक । पुरा पढ्नुहोस्
काम गर्नेहरूले हल्ला गर्दै हिँडेको कहिल्यै देख्नुभा’छ र ? जसले केही गर्छन् तिनीहरू गुपचुप काम फत्ते गर्छन् । जब सार्वजनिक हुन्छ तब काम सफल भैसकेको हुन्छ । काम नगर्नेहरूले चाहिँ हल्ला–खल्ला गर्दै हिँड्छन्, प्रगतिचाहिँ शून्य ! यो हाम्रो देशको एउटा बलियो संस्कार हो भनौं कि कुसंस्कार ! पुरा पढ्नुहोस्
काम विशेषले काठमाडौंबाट अलि पर पुग्नुपर्छ, मोबाइलमा नेटवर्क हुँदैन । काठमाडौं भित्रै पनि कतिपय ठाउँमा मोबाइलको नेटवकले कामै गर्दैन । अर्जेन्ट भएका बेला मोबाइलमा कुरा गर्न नपाउँदा दिक्क लाग्छ । पुरा पढ्नुहोस्
हिजोजस्तै लाग्छ, इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) सुरु भएको । समय कति चाँडै बित्छ भने यसपटक अर्थात् २०१९ को आईपीएल यसको १२ औं संस्करण हो । सुरुमै भनिएको थियो, यसले विश्व क्रिकेटलाई परिवर्तन गर्नेछ र त्यस्तै भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेपाली धर्तीमा जन्मेर बलिउडमा समेत राज गर्न सफल भएका अभिनेता हुन्, सुनील थापा । यो नामले पाएको सफलता धेरै नेपाली कलाकारले दिनरात देख्ने सपना पनि हो । डेढ दर्जन भन्दा धेरै बलिउड चलचित्रमा समेत काम गरिसकेका अभिनेता थापाका केहि बलिउड चलचित्र रिलिजको तयारीमा छन् भने बलिउडका धेरै प्रोजेक्टमा काम गर्ने सम्झौता भैसकेको छ । पुरा पढ्नुहोस्